﻿	ကပ်ခွာပြား ခဏခဏပြုတ်ကျနေလျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ? | Find My Method
ကပ်ခွာပြား ခဏခဏပြုတ်ကျနေလျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ?
မကြာခဏမေးသောမေးခွန်းများ » ကပ်ခွာပြား » ကပ်ခွာပြား ခဏခဏပြုတ်ကျနေလျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ?
ကပ်ခွာပြား ခဏခဏပြုတ်မကျပါ။ ဒါပေမယ့် ကပ်ခွာပြား ပြုတ်ကျရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့။ ၂၄ နာရီထက်နည်းပြီး ကပ်ခွာပြား ကဆက်ပြီးကပ်နေသေးလျှင် ၎င်းကိုဆက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ် သင် ကပ်ခွာပြား အသစ်တစ်ခုကိုသုံးနိုင်သည်။
မကပ်သော ကပ်ခွာပြား ကိုကပ်နေအောင် ပတ်တီး၊ တိပ် သို့မဟုတ် ကော်ကိုမသုံးပါနှင့်။ သင့်ကိုကိုယ်ဝန်မဆောင်ရန်တားဆီးသောဟော်မုန်းများသည် ကော်နှင့်ရောစပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်မကပ်တော့ပါက ထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်တော့ပါ။
ဒီလိုလုပ်ကြည့်ပါ – သင်၏ကပ်ခွာပြားကပ်မည့် အရေပြားပေါ်တွင်လိမ်းဆေး၊ အဆီ၊ အမှုန့်၊ ခရင်မ်၊ ဆေးများကိုမသုံးပါနှင့်။ ရေချိုးပြီး လိုးရှင်း သို့မဟုတ် ဆီသုံးခြင်းသည် ကပ်ခွာပြား ကပ်ရာတွင် အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။
အလုပ်မဖြစ်သေးဘူးလား။ အကယ်၍ ၎င်းသည် ဆက်၍ ကွာကျနေပါက အတွင်းပိုင်းတွင်ထားရှိသောနည်းလမ်းတစ်ခုကို သင်စမ်းချင်ပေမည်။ Implant၊ IUD သို့မဟုတ် အဝိုင်းကွင်း
အခြားနည်းလမ်းသုံးမယ်-Implant၊ IUD၊ အဝိုင်းကွင်း
Reproductive Health Access Project. (2015). THE PATCH. မှရယူရန် https://www.reproductiveaccess.org/wp-content/uploads/2014/12/factsheet_patch.pdf